लक्षण देखिएको २४ देखि ४८ घण्टा भित्रै आँखाको दृष्टि गुमाउन सक्ने शापु रोग के हो ? कसरी जोगिने ? | Nepali Health
२०७८ असोज ७ गते ८:२२ मा प्रकाशित
सिजनल हाइपर एक्युट पान युभिलिटिज (शापु) एक दृष्टि नाशक आँखाको रोग हो । यो रोग प्राय नेपाली बालबालिकाहरुमा विसं २०३२ साल देखि देखा परेको हो । वर्षायाम पछिको समय प्राय: भदौ देखि मंसिर महिनासम्म विशेषगरी नेपालको मध्य पहाडी भेगमा शापु महामारीको रुपमा देखा पर्ने गरेको छ । यो रोगको लक्षणहरु देखा परेको २४ देखि ४८ घण्टा भित्रै उपचार हुन नपाए आँखाको दृष्टि गुम्न सक्ने तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ ।
यो रोग लाग्ने कारण ?
हालसम्म सेतो पुतली (मोथ) लाई शापुको कारकको रुपमा प्राय जोडिने गरेको छ । तथापी कतिपय अवस्थामा भने सेतो पुतलीको संसर्गमा नआएका बिरामीहरुमा पनि यो रोग देखा परेको छ । साथै अन्य कारणहरुमा सुक्ष्म जिवाणु एवं विषाणु समेत रहेको पाइएको छ । तर हालसम्म यो रोगको कारक यहि नै हो भनेर यकिन भएको छैन् ।
एक्कासी एउटा आँखा रातो हुनु ।
चिप्रा नलाग्नु ।
उज्यालोमा हेर्न नसक्नु ।
आँखाको दृष्टिमा तत्कालै कमी हुनु ।
आँखाको दुखाई सामान्य वा बढी हुनु ।
उपचारमा ढिला भएमा कालो नानीमा सेतो देखिन्छ ।
यो रोगको निदान तथा उपचार आँखा विभाग अस्पतालहरुमा मात्र गर्ने गरिन्छ । शापुको आकस्मिक उपचार सेवा आँखा भित्र औषधिको सुई लगाएर तथा जटिल अवस्थामा आँखाको शल्यक्रिया समेतबाट गर्ने गरिन्छ । समयमा नै उपचार भएमा मात्र आँखा निको हुन्छ तर ढिला हुन गएमा बिरामीको दृष्टि गुम्न सक्छ वा आँखा सुकेर जान सक्छ ।
शापु रोग लाग्नबाट बच्नका लागि,
सेतो पुतली (मोथ)को संसर्गबाट टाढै रहने ।
धेरै उज्यालो सेतो बत्ति नबाल्ने ।
साँझ र राती झ्याल ढोका बन्द गर्ने ।
सम्भव भएसम्म झ्याल ढोकामा जाली हाल्ने ।
सुत्ने कोठामा बत्ति निभाएर वा मधूरो बत्ती बालेर झूलभित्र मात्रै सुत्ने ।
– रोगको लक्षण देखा परेमा वा शंका लागेमा तुरुन्तै आँखा विभाग अस्पतालमा जाने ।
– आफूखुशी कुनै पनि आँखाको औषधि तथा जडिबुटी नराख्ने ।
– आँखा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सल्लाह बमोजिम उपचार गर्ने ।
सुदूरपश्चिमको धनगढीमा क्यान्सर अस्पताल खोल्ने दुर्गा प्रसाईंको घोषणा
अमेरिकाद्वारा विकासशील मुलुकहरूलाई थप ५० करोड डोज फाइजर खोप बाँड्ने घोषणा